Izindaba - "IViki Likazwelonke Lokukhuthaza Ukuphepha Kwedivayisi Yezokwelapha" Ukuthengwa kwesayensi nokufanele kwemishini yezokwelapha yasendlini
"IViki Likazwelonke Lokukhuthaza Ukuphepha Kwedivayisi Yezokwelapha" Ukuthengwa kwamadivayisi wezokwelapha ngokwesayensi nangokunengqondo
Amadivayisi wezokwelapha abhekisa kumathuluzi, okokusebenza, okokusebenza, ama-re vitenti wokuxilonga ama-in vitro kanye nama-calibrators, izinto zokwakha, nezinye izinto ezifanayo noma ezihlobene ezisetshenziswe ngqo noma ngokungaqondile emzimbeni womuntu, kufaka phakathi isoftware yekhompyutha edingekayo. Ukusetshenziswa kutholakala ikakhulukazi ngezindlela zomzimba, hhayi nge-pharmacology, i-immunology, noma i-metabolism, noma noma lezi zindlela zibandakanyekile kepha zidlala indima yokusiza kuphela. Inhloso ukuxilonga, ukuvimbela, ukuqapha, ukwelashwa noma ukunciphisa izifo; ukuxilongwa, ukuqashwa, ukwelashwa, ukuncishiswa noma isinxephezelo sokusebenza kokulimala; ukuhlolwa, ukushintshwa, ukulungiswa noma ukusekelwa kwezakhiwo zomzimba noma izinqubo zomzimba; ukusekelwa noma ukugcinwa kwempilo; ukulawula ukukhulelwa; Nikeza imininingwane ngezinhloso zokwelashwa noma zokuxilonga ngokuhlola amasampula emzimbeni womuntu. ILanzhou Municipal Market Supervision Bureau ikhumbuza abathengi ukuthi kufanele balalele imibono yodokotela ngaphambi kokuthenga imishini yokwelapha emakhaya futhi bayisebenzise beholwa odokotela. Esinye sezici ezilandelayo kufanele sinakwe lapho uthenga imishini yokwelashwa yasekhaya:
Abathengi bathenga imishini yokwelapha emakhemisi ejwayelekile nasemabhizinisini amadivayisi ezokwelapha athola i- "Medical Device Business Licence" kanye ne- "Second Class Medical Device Business Certificate".
02 Buka iziqu zomkhiqizo
03 Buka imiyalelo
Ngaphambi kokuthenga idivaysi yezokwelapha, abathengi kufanele bafunde ngokucophelela imanuwali yomkhiqizo, bacacise indlela yokusebenza, ububanzi besicelo, indlela yokusetshenziswa, izindlela zokuzivikela, ukuphikisana nokunye, futhi bayisebenzise ngokufanele ngokuya ngezeluleko zikadokotela nezimo zabo.
04 Cela i-invoyisi
Abathengi kumele bathole ama-invoyisi okuthenga lapho bethenga amadivayisi wezokwelapha ukuvikela amalungelo abo.
Ama-mask wezokwelapha we-05
Amaski ezokwelapha angaphansi kwesigaba sesibili samadivayisi wezokwelapha, futhi isitifiketi sokubhalisa sedivayisi yezokwelapha kanye nelayisense yokukhiqiza kufanele kutholakale, futhi inombolo yokubhalisa nenombolo yelayisense yokukhiqiza kufanele ibhalwe emaphaketheni.